Rajadii laga Qabay isbadal lagu sameeyo xisbiga Talada deegaanka Haya oo laga Quustay. | ogaden24
Rajadii laga Qabay isbadal lagu sameeyo xisbiga Talada deegaanka Haya oo laga Quustay.
Jan 12, 2019 - Aragtiyood
Kulamo iyo shirar is daba Jooga oo lagu sheegay Tababaro iyo Aqoon is waydaarsi lagu dhisayo Garaadka iyo Kartida Hogaamineed ee xisbiyahanada oo mudo 3- Todobaad ah u socday Hogaaminta kala duwan ee xisbiga Haya Talada deegaanka Somaalida ayay Kaqayb Galayaashu Jug Jug meeshaada kujoog kusifeeyeen.
Inta badan xubnaha xisbiga ee laga soo aruuriyay Gobolada iyo degmoyinka deegaanka ee kaqayb Galay Tababarka iyo aqoon is waydaarsiga, ayaa u arka inaysan jirin wax Farqi ah oo u dhexeeya Qorshaha Hogaamintii Hore ee xisbiga iyo mida Haatan majaraha u Haysa, waxaana xubno kamid ah oo xog waraysi aan layeelanay ay kudoodayaan in xisbigu xisbigii yahay.
Axmed oo kamid ah xubnaha Gobolka Faafan ee Hogaaminta dhexe ayaa yidhi” Majiro wax Tababar ah oo naloo Qabtay kaliya waxbaa naloo sheegay, waxa naloo sheegayna waxay ahaayeen wixii Horay naloogu sheegi jiray mana Aaminsani Haba Yaraatee in madaxda xisbigu wax is badal ah samaynayaan, waayo kuwa is badalka laga sugayo ayaa ah kuwii is badalku saamayn lahaa.
Nageeye oo isna kamid ah xubnaha xisbiga ayaa Ogaden24 u sheegay in madaxda xisbigu ay Layimaadeen Qorshe diyaarsan oo ay waajib tahay in Laraaco, majirto aragti iyo dood xor ah oo xubnuhu kaga dooyaan Geedi socodka siyaasadeed ee Hogaaminta xisbiga, sidoo kale majirto wax is badal ah oo lagu sameeyay xeer Hoosaadka xisbiga iyo Hogaamintiisa, xubnaha Hogaaminta een kamidka ahaan kaliya waxaa naloo sheegay Qaabka aan u shaqaynayno iyo cida aan Hoos imaanayno.
Aniga iyo 8-xubnood oo kale waxaan soo Jeedinay in Talada Lafur furo oo wax laga badalo xeer Hoosaadka xisbiga, balse waxaa nalaga saaray shirka oo maalin dhan ayaan dibad Joog ahayn, kadibna si Gaara ayaa naloogu sheegay in Talaabo nalaga Qaadayo Hadii aanaan u Hogaansamin Awaamiirta Hogaaminta sare” ayuu yidhi Nageeye”, oo intaa kudaray inaysan jirin wax Raja ah oo laga Qabo in is badal lagu sameeyo Qaab dhismeedka xisbiga iyo Hogaamintiisa.
Faarax oo isna kamid ah xubnaha xisbiga ee Gobolka Nogob ayaa kudoodaya isagu in Tababarka iyo Aqoon is waydaarsigu ahaayeen kaliya in xubnaha xisbiga Labaro Gudomiye Axmed Shide, balse aysan Jirin dib u Qaabayn iyo wax kabadal lagu samaynayay Qaab dhismeedka Hogaamineed ee xisbiga iyo shuruucdiisa.
Gudiga shirwaynaha loo saaray majirto cid lagala Tashaday oo shakhsiyaad Gudomiyuhu si Gaara u xushay sidoo kale Gudi Hoosaadyada Gudiga Hoos imaanaya iyaguna waa sidoo kale, sidaa darteed lagama Yaabo in shirwaynaha xisbiga wax is badal ah kuyimaado kaliyana waxaa kasoo baxaya waa shakhsiyaad hada ba Qorshaysan oo diyaarsan” ayuu Hadalkiisa kusoo Koobay Nageeye”.
Tababarka iyo Aqoon is waydaarsigu ma’ahayn mana aha kuwo xubnaha Hogaaminta xisbigu wax door ah kuleeyihiin, wax kastana waa Lasii Habeeyay muhiimada siminaaraduna waa in dadka lagu marin Habaabiyo iyada oo Lajilayo filimo kaxun kuwii Cabdi iley”, ayuu yidhi Sahal oo kamida xubnihii kasocday Gobolka Liibaan oo isna aragtidiisa lawadaagay Ogaden24.
Sahal waxaa uu Aaminsan yahay in Cabdi iley Axmed Shide lagu badalay waxa kaliya ee dadka loo sheegayayna ay intaas ahayd, shirwaynaha xisbigana waxa kaliya ee loo Qabanayo waa in Axmed dadka lagu soo baro” ayuu yidhi Sahal oo intaasi raaciyay in xisbiga iyo xitaa Hogaamintiisa sare aysan xor ahayn oo xitaa su’aalaha aysan ka Jawaabi karin.
Isku soo wada duube marka aad u Kuurgasho dooda iyo aragtida xubnihii xaadiray Tababaradii Hogaaminta kala duwan ee xisbiga loo Qabtay, waxaa kuu soo baxaysa in aanu Jirin wax is badal ah oo laga Filan karo shirwaynaha xisbiga oo rajo laga Qabo inuu dhowaan Qab-soomo maadaama xubnaha Hogaaminta dhexe iyo Hoose wuxuu loogu Yeedhay kaliya uu noqday Tababar kusalaysan Awaamiir ay tahay inay kula Noqdaan Goobihii ay kayimaadeen.